सहरलाई कुरूप हुनबाट जोगाऔं – Rajdhani Daily
सहरलाई कुरूप हुनबाट जोगाऔं
काठमाडौंको मुटुमा रहेको टुँडिखेल सर्वसाधारणले फालेको फोहोरले कुरूप बनेको छ । राजधानीको मध्यसहरमा भएको सम्भवतः सबैभन्दा फराकिलो क्षेत्रफल भएको खुला चौरमा फ्याँकिएको फोहोरले सिंगै काठमाडौंवासीको मानमर्दन गरेको अनुभव कसैले गरेको देखिएन । किनकि भीडभाडयुक्त सहरका लागि खुला स्थान आफैंमा एउटा सौन्दर्य हो भने बिहान–बेलुका ‘मर्निङवाक’ गर्नेहरूमध्ये कतिले अहिले पनि यही चौर प्रयोग गरिरहेका छन् । पहिलो कुरो त ‘यत्तिको चौर फोहोर गर्नुहुन्न’ भन्नेमा आमनागरिक सचेत हुनुपर्ने हो । अन्य मुलुक भएको भए पक्कै घरमा थुप्रिएको फोहोरको पोको ल्याएर सार्वजनिक चौरमा विसर्जन
गर्ने थिएनन् ।
दुःखको कुरो हाम्रोमा नैतिक शिक्षा विद्यालयमा मात्रै पढाइ हुन्छ । विद्यालयमा पनि मात्रै परीक्षामा उत्तीर्ण हुनका लागि पढिने हो, नैतिक शिक्षा । घर, कार्यालय वा टोल छिमेकमा नैतिक शिक्षाको खाँचो पर्दैन । यदि कसैले महसुुुस गरेको थियो भने काठमाडौंको समाज नैतिक रूपमा यति भ्रष्ट हुने थिएन । भ्रष्ट केवल कसैको पैसा खानेलाई मात्रै भनिँदैन । सडकमा रोपेका बिरुवा भाँच्ने, सार्वजनिक स्थानमा खैनी, सुर्ती, चुरोट खाने, अपशब्द बोल्ने र फोहोर फ्याँक्ने नैतिक रूपमा भ्रष्ट हुन् । यस्तै भ्रष्टहरूको बिगबिगी बढेपछि समाजमा नैतिकताको खडेरी पर्नु स्वाभाविक हो । यसले समाजलाई नै भ्रष्ट बनाउने गर्छ भने अहिले भएको पनि त्यही नै हो । कानुनमा हामी सिंगै देश सफा गर्ने कुरो लेख्छौं तर घरभित्र जम्मा भएको फोहोरको पोकोलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने सोच्दैनौं । कुरा टुँडिखेलको मात्रै होइन, वीर अस्पतालअघिको खुलामञ्चको हालत पनि उस्तै छ भने काठमाडौंमा बग्ने विष्णुमती, बाग्मती, टुकुचालगायतका नदी घरघरबाट फ्याँकिएका फोहोरकै कारण विरूप छन् ।
प्रत्येक व्यक्तिले फोहोरको अव्यवस्थित विसर्जन गरेकाले टुँडिखेल कुरूप भएकोमा कुनै शंका छैन । तर के यसरी फोहोर फ्याँक्नेलाई कुनै कारबाही नै नगर्ने ? के कारबाही गर्ने कुनै निकाय छैन ? सम्बन्धित निकायले अब आँखा खोल्नुपर्छ । हिजोका दिनमा स्थानीय तह कर्मचारीका भरमा चलेको थियो । कर्मचारी मात्रै हुँदा कतिपय काम चाहेर पनि गर्न सक्ने अवस्था थिएन । तर अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेकाले प्रत्येक वडावडामा जनप्रतिनिधि भेटिन्छन् । अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट धेरै अपेक्षा गर्ने अवस्था देखिएन । कम्तीमा प्रत्येक जनप्रतिनिधिले आफ्नै टोल घुमेर कहाँ कति फोहोर जम्मा भएको छ भन्ने मात्रै हेरेमा सहरलाई पुरै सुन्दर बनाउन नसके पनि थप कुरूप हुनबाट जोगाउन सकिन्थ्यो कि ? जनप्रतिनिधिले आफ्ना दायित्व निर्वाह गरेका भए आज हाम्रो सहर यति कुरूप हुने थिएन । नियम त बाटो वा सार्वजनिकस्थलमा फोहोर फ्याँक्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ । तर फोहोरले टुँडिखेल छोपिन लाग्दा पनि अहिलेसम्म एक जनालाई कारबाही भएको नसुनिनु दुःखको कुरा हो ।